Ukuqeqeshwa Kokumiswa - Uyazi Zonke Izinzuzo Zakho Ezinkulu? | Bezzia
USusana godoy | 08/06/2021 16:00 | Ukuzivocavoca
Uyazazi izinzuzo zokuqeqeshwa kokumiswa? Kubukeka sengathi izibeke njengomunye wemibono emihle yeminyaka yakamuva. Indlela engaphezu kokufanele yokuqeqesha umzimba futhi ngenxa yalokho, futhi inezinzuzo eziningi ezizungezile ezifanele ukunakwa.
Namuhla sikhuluma ngazo zonke ukuze kuthi, uma ungakaqali ngendlela efana nale, ungacabangi kabili. Kepha uma kunjalo, akukho okufana nokwazi ukuthi kusizuzisa ini. I-TRX ithola indawo eningi ezimpilweni zethu nasezikhungweni zezemidlalo. Asibheje ngaye!
1 Uzosebenza umnyombo njenganini ngaphambili
2 Uzolungisa ukuma kwakho
3 Amandla amaningi omzimba wakho
4 Uzokhuluma ngomzimba
5 Izokwehlisa ubuhlungu beqolo
Uzosebenza umnyombo njenganini ngaphambili
Kuyiqiniso ukuthi sinokuzivocavoca okuningi ukuze sikwazi ukusebenza ngengxenye eyinhloko, kepha ngokuqeqeshwa kokumiswa, uzokwenza ngokuphindwe kabili. Yize sinokunyakaza okuningana ekubulaweni ngakunye, ngaphandle kokungabaza, le ngxenye izoba ngenye yezinto ezithandwa kakhulu. Kuzofanele senze amandla ngengxenye yesisu futhi lokho kuyizindaba ezinhle njalo, ngoba kufanele ngaso sonke isikhathi sibe namandla kakhulu ukuze sijabulele impilo engcono nokuvikelwa okuhle kwezinye izitho zomzimba wethu. Ngakho-ke, uma i-abs bekuhlala kuyisudi yakho eqinile noma ubesaba amapulangwe, ngena ekuqeqesheni ukumiswa ukuze ujabulele i-abs enamandla.
Uzolungisa ukuma kwakho
Impela lapho uya ekilasini ejimini yakho, bakutshela lokho kufanele ulungise imikhuba ethile ye-postural. Lokhu kungenxa yokuthi kwesinye isikhathi sichitha isikhathi esiningi sisendaweni efanayo futhi akulula ngaso sonke isikhathi ukulawula umzimba wonke. Ngakho-ke, lapho sigxila endaweni efana nomongo, ngisho nendlela yakho yokucabanga izoshintsha. Kusukela ngokukusebenzisa, sizobe sijabulela ukuma okunethezeka nokuqondanisa okungcono. Kepha hhayi lokho kuphela, kepha ngenxa yalokhu kulungiswa sizophinde sithi ukuvalelisa ekulimaleni. Konke lokhu, ngenxa yokuqeqeshwa kokumiswa.
Amandla amaningi omzimba wakho
Kwesinye isikhathi asizenzi izivivinyo zamandla futhi iqiniso ukuthi umzimba uzohlala uzidinga. Yebo, ngaphandle kwalokho, ahlanganiswe nama-choreographies akhethekile anjalo njengalezo i-TRX esikhombisa zona, zizohlala ziyizindaba ezimnandi njalo. Ngoba kulokhu imisipha izobandakanyeka kakhulu futhi cishe ungahlosile. Ngakho-ke uzothuthukisa amandla akho kanye nesimo sakho somzimba ngokujwayelekile, ngoba uzobona izinguquko ezikuwo kusukela ekusebenzeni kokuqala. Kulokhu, akufani nalapho kwenziwa izinsimbi, okuthi, njengoba sazi kahle, ziboleke indawo ethize yomzimba, lapha kuzoba yilowo nalowo obandakanyekayo futhi lokho kumele kuqhakanjiswe.
Ngenkathi sisanda kusho ukuthi sihilela umzimba wonke nemisipha yawo, kepha ngeke sikhohlwe ukuthi umphumela uzoba umzimba onamathoni amaningi. Ukuthuthukisa njalo ukusebenzisana kanye nokuhamba ofanayo. Uzobona ukuthi ukuguquguquka sekuphinde kwaba khona kanjani empilweni yakho. Njengoba njengoba sibonile, kuhlale kunokuzivocavoca umzimba okusisiza ukuthi sibukeke futhi sizizwe singcono kakhulu futhi lokhu kungenye yazo.
Izokwehlisa ubuhlungu beqolo
Kunabantu abaningi abakhononda ngobuhlungu beqolo futhi akumangalisi. Ngoba kulezi zinsuku siphila ngendlela yokuthi ngenxa yomsebenzi, umzimba wethu kanye nomhlane kuyahlupheka. Ngakho-ke, akukho okufana nokuzivocavoca umzimba ukuze ukwazi ukuxazulula lezo eziyinkimbinkimbi. Phakathi kwezinzuzo zokuqeqeshwa kokumiswa sinayo ezokwehlisa lezi zinhlungu futhi ivimbele ukuhlupheka kwezinhlungu ezisezingeni eliphansi okungaba futhi okucasulayo ngokujwayelekile. Lokhu kungenxa yokuthi nayo iyasebenza, futhi okuningi, iqolo elingezansi. Siqala nini ukuqeqeshwa?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Ukuzivocavoca » Izinzuzo zokuqeqeshwa kokumiswa
Wenza kanjani amehlo aluhlaza